News Collection: यसो भन्छिन् नयाँ मिस नेपाल With Photo Gallery! Miss Nepal Manila Joshi
यसो भन्छिन् नयाँ मिस नेपाल With Photo Gallery! Miss Nepal Manila Joshi
मिस नेपाल-२०११ को मुकुट पहिरिँदा कस्तो लागिरहेको छ ?
अहिले बुधबार बिहान नौ बज्यो। मैले मुकुट पहिरिएको १३ घण्टा जति भयो तर अझैसम्म पनि मलाई विश्वास लागिरहेको छैन। एउटा सपनाजस्तो लागिरहेको छ। म कति खुसी छु, व्यक्त गर्न सकिरहेकी छैन।
कुन कुराले तपाईंलाई मिस नेपाल बनायो ?मेरो धेरै पहिलेदेखिको चाहनाले नै मलाई मिस नेपाल बन्न सहयोग पुर्‍यायो। कार्यक्रम अवधिभर म न त ओभर कन्पिmडेन्स भएँ, न त ओभर एक्साइटेड नै। सायद यिनै दुई कुरामा नियन्त्रण गर्न सकेकाले म विजयी भएँ।
यस पटकको मिस नेपालमा काठमाडौंबाहिरका युवतीहरू हाबी रहे नि ?(हाँसो) हामी पनि अचम्ममा परेका छौं। टप फाइभ चरणमा मनीषा विष्ट -भक्तपुर) बाहेक हामी चारै जना प्रतिस्पर्धी काठमाडौंबाहिरका थियौं। धरान, वीरगन्ज र चितवनमध्ये यसपटक धरानले बाजी मार्‍यो।
आफ्ना बारेमा केही भनिदिनुहोस् न ?
म एउटा मध्यम परिवारमा जन्मिएकी युवती हुँ। धरानको सिद्धिचरणमार्गमा हाम्रो घर छ। म बुबा माधवप्रसाद जोशी तथा आमाहरू मीना जोशी र लक्ष्मी जोशीकी माहिली सन्तान हुँ। आमा-बुबाबाहेक मेरी एक जना दिदी नुकिना र भाइ सुरज छन्।
दुई जना आमा ?
हजुर, मेरो ठूलो आमाले सन्तान जन्माउन नसक्ने भएपछि बुबाले उहाँसँगै सल्लाह गरेर मेरी आमासँग दोस्रो विवाह गर्नुभएको थियो। बुबाले दोस्रो विवाह नगर्नुभएको भए म आज मिस नेपाल बन्न सक्दिनथेँ।
म धरानको घोपा क्याम्पमा जन्मिएँ, धरानमै हुर्किएँ। हाम्रो परिवार मध्यमस्तरको भएकाले अन्य बालबालिकाहरूझैं म पनि सामान्य रूपमै हुर्किएँ। पढाइमा म अलि तेज थिएँ त्यसैले त्यसताका विज्ञान पढेर डाक्टर, इन्जिनियर बन्छु भन्ने सोच थियो, तर एसएलसीपछि विज्ञान पढ्न मन लागेन। व्यवस्थापन विषयमा प्लस टु गरेपछि बिबिएस र एमबिए गरेँ।
भविष्यमा के बन्ने लक्ष्य छ ?
यो वर्ष त म मिस नेपालका रूपमै व्यस्त हुनुपर्नेछ। मिस नेपाललाई सेलिब्रेटीका रूपमा लिइने भएकाले म त्यही रूपमा व्यस्त हुनेछु। जहाँसम्म करियरको कुरा छ, मार्केटिङमा एमबिए गरेकी छु, मार्केटिङमै केही गर्न चाहन्छु।
मिस नेपालको निणर्ायक चरणमा तपाईंले दिएको जवाफको पूर्व तयारी गर्नुभएको थियो कि अचानक दिमागमा आयो ?
रमाइलो प्रश्न सोध्नुभयो ! वास्तवमा हामी सबै प्रतिस्पर्धीलाई यसपटक पि्र-जजिङमा सहभागी गराइएको थियो। सबै ११ जना निणर्ायकले हामीलाई एक-एक गरी विभिन्न विषयमा प्रश्नहरू सोध्नुभएको थियो। महिला सशक्तीकरणका बारेमा पनि कुरा उठेको थियो। त्यसबेलाको छलफलले मलाई धेरै सहयोग गर्‍यो ?
भन्नाले, निणर्ायक चरणमा के प्रश्न सोधिन्छ भन्ने तपाईंलाई पहिले नै थाहा थियो ?
त्यस्तो भन्न खोजेको होइन, हामी सबै प्रतिस्पर्धीलाई महिला सशक्तीकरणका बारेमा बताइएको थियो। मैले चाहिं अहिलेको समाजमा विश्वव्यापी रूपमै महिलाहरू कसरी पुरुषभन्दा अघि बढिरहेका छन् भन्ने कुराको अध्ययन गरेकी थिएँ।
निणर्ायक चरणमा लिखित जवाफ तयार पार्नुअघि के सोच्नुभएको थियो ?
हामी सबै प्रतिस्पर्धीलाई प्रशिक्षणकै क्रममा जवाफ लेख्नुभन्दा अघि दुई-चार सेकेन्ड सोच्नु अनि मात्र लेख्नु भनेर सिकाइएको थियो। मैले त्यसै गरेँ। यद्यपि मेरो जवाफ अरू प्रतिस्पर्धीहरूको भन्दा उत्कृष्ट होला भन्ने कुरा सोचेकै थिइनँ।
तपाईंले भन्नुभएजस्तै महिलाहरूले राज्य गर्न थालिसकेका हुन् त ?
(हा हा हा....) अवश्य। अहिले हरेक क्षेत्रमा महिलाहरू पुरुषभन्दा कुनै पनि कुरामा कमी छन् जस्तो लाग्दैन। राजनीति, आर्थिक, प्रशासनिक हरेक क्षेत्रमा महिला सहभागिता बढ्दो छ। नेपालमा पनि बिस्तारै महिलाहरू सशक्त हुने क्रम बढ्दो छ। सन् २०५० सम्ममा त महिलाहरूले यो विश्वलाई नै बसोबास गर्न योग्य थलो बनाउनेछन् भन्ने कुरामा शंकै छैन।
तर नेपालमा त हालसम्म कुनै पनि महिला प्रधानमन्त्री भएका छैनन् नि ?
यो त राजनैतिक कुरा भयो ! तर यदि कुनै दिन नेपालमा पनि महिला प्रधानमन्त्री भइन् भने अहिले देखिएको राजनैतिक अस्थिरता केही महिनामै समाधान हुनसक्छ।
तपाईंको विचारमा २१ औं शताब्दीका महिला र पुरुषमा के कुराको अन्तर छ ?
मेरो विचारमा महिला र पुरुषबीच अन्तर हुने एउटा मात्र कुरा छ, त्यो हो- शारीरिक बनावट। पुरुष र महिलाको शारीरिक बनावट मिल्दैन। यसबाहेक हरेक कुरामा महिला र पुरुष समान छन्।
नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईबाट कस्तो आशा गर्नुभएको छ ?
उहाँ भर्खरै प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। उहाँको पृष्ठभूमि हेर्दा हामी सबै नेपालीले उहाँबाट केही राम्रो कुराको आशा गरेका छौं। अझ म त भन्छु— उहाँले देशमा केही परिवर्तन नै ल्याउनुहुन्छ। केही राम्रो कुरा दिनु हुन्छ जस्तो लाग्छ।
नयाँ मिस नेपालका रूपमा उहाँलाई सुझावचाहिँ के दिनुहुन्छ नि ?
म नयाँ मिस नेपाल भएझैं उहाँ पनि नयाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। त्यसैले आजै म उहाँलाई केही पनि सुझाव दिन चाहन्नँ। उहाँलाई तीन-चार महिना काम गर्न दिएपछि मात्र कुनै सुझाव दिन सकिन्छ।
प्रसंग बदलौं, कत्तिको फेसनेबल हुनुहुन्छ ?
मैले अघि नै भनेँ, म एउटा सामान्य परिवारमा हुर्किएकी युवती हुँ त्यसैले म अत्यन्त फेसनेबल छु भन्दिनँ। जे लगाउँदा सुहाउँछ त्यस्तै पहिरनहरू लगाउँछु।
कस्ता पहिरन लगाउन मन लाग्छ त ?
मलाई सबैभन्दा मन पर्ने पहिरन सारी हो।
तर सहरमा त युवतीहरूले युवकका पहिरन लगाएर हिंड्न थालेका छन् नि ?
मलाई टम ब्वाइजस्तो भएर, ब्यागी पाइन्ट, लुज टिसर्ट लगाएर हिंड्न कहिल्यै मन लागेन। म महिलाले जे लगाउँदा सुहाउँछ त्यही लगाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु।
प्रेम एउटा त्यस्तो चीज हो जुन हरेकले कम्तीमा एकपटकचाहिँ गर्नैपर्छ।
तपाईंले गर्नुभएको छ कि छैन ?
यो प्रश्नको जवाफ नदिँदा हुँदैन ? प्रेमजस्तो कुरा कसरी सार्वजनिक गर्नु ?
भन्नाले कसैसँग प्रेम गरिरहनुभएको छ ?
यस विषयमा केही नबोलौं।
विवाहचाहिं कस्तो गर्ने नि ?
म एरेञ्ज म्यारिज गर्छु। मलाई मेरो बुवा-आमाले यहाँसम्म ल्याउन धेरै संघर्ष गर्नुभएको छ। उहाँहरूको चाहनाविपरित म प्रेमविवाह गर्दिनँ।
तपाईंले मन पराएका पुरुषसँग एरेन्ज म्यारिज हुन सक्दैन ?
त्यो त हुन सक्छ, तर उसले विवाहका लागि आफ्नै शर्तहरू राख्न थाल्यो भने म त्यसलाई स्वीकार गर्दिनँ। मेरा लागि मेरा आमा-बुवाभन्दा ठूलो अरू कोही हुन सक्दैन।
कत्तिको राम्री हुनुहुन्छ ?
(हाँसो) सबैले राम्री छयौ, प्रतिभाशाली छयौ भन्छन्। त्यही भएर त म मिस नेपालमा प्रतिस्पर्धा गर्न आएको हुँ, तर मिस नेपालको निणर्ायक प्रतिस्पर्धामा मलाई कति नराम्री देखिएको रहेछ, के भन्नु ?
कसरी नराम्री देखिनुभयो ?
कार्यक्रम प्रारम्भ हुनुअघि मेरो केशको जुरो बनाइएको थियो। स्टेजमा जानेबित्तिकै फुस्कियो। हामी सबै प्रतिस्पर्धीलाई आई लेन्स लगाउन दिइएको थियो, मेरो एउटा आँखाबाट त्यो पनि झर्‍यो। लिपस्टिक र मेकअप पनि आधा हराइसकेको थियो। क्राउनिङ राउन्डमा आइपुग्दा त म रुन थालिछु। त्यसले मेरो मेकअप अझ बिगि्रयो।
यी सबै कुरा त पहिले नै विचार गर्नुपर्ने होइन र ?
यहाँ पनि आर्थिक पक्ष अघि आउँछ। सबैले एक-एक जना ब्युटिसियन राखेका रहेछन्। म व्यक्तिगत रूपमा ब्युटिसियन राख्न सक्ने हैसियतकै भइनँ, त्यसैले मैले स्टेजमा आफूलाई राम्री देखाइरहन सकिनँ।
केश बिग्रँदा, मेकअप बिग्रँदा कन्पिmडेन्स गुम्ने डर हुँदैन ?
धन्य छ, सहाना बज्राचार्य -मिस नेपाल फस्ट रनर्स अप-२०१०) लाई। उहाँले एउटा प्रसंगमा मलाई स्टेजमा लगाइरहेको पहिरन बिगि्रयो भने पनि नर्भस नहुनु, आफ्नो कन्पिmडेन्स नगुमाउनु, बोल्ने कुरामा ध्यान दिनु भन्ने सुझाव दिनुभएको थियो। उहाँले सिकाएअनुसार नै मैले मेरो केश, मेकअप, लिपस्टिक जे-जे बिगि्रए पनि नर्भस भइनँ, कन्पिmडेन्सका साथ जवाफ दिएँ। तर आज -बुधबार) पत्रपत्रिकामा आफ्नै तस्बिर देख्दा आफैंलाई चिनिनँ। तस्बिरमा देखिएझैं म त्यति नराम्रीचाहिं छैन।
तपाईंको विचारमा जीवन के हो ?
जीवन त्यस्तो चीज हो जसलाई हामीले हरेक दिन सामना गर्नुपर्छ। हामी यही जीवन रमाई-रमाई पनि बिताउन सक्छौं। म भन्छु— जीवनका हरेक पलको मज्जा लिन सक्नुपर्छ।
सुन्दरता के हो ?
सुन्दरता त्यस्तो वस्तु हो जसलाई व्यक्तिको आँखाले मापन गर्न सकिँदैन। यसलाई तपाईं आफैंले मूल्यांकन गर्न सक्नुपर्छ।
कुनचाहिं सेलिब्रेटीसँग डेटिङ गर्न चाहनुहुन्छ ?
पुरुषको कुन अंगले तपाईर्लाई आकषिर्त गर्छ ?
उसका हात र आँखाहरूले !
तपाईंले आफ्नो एउटा मात्र सकारात्मक पक्ष बताउनुपर्‍यो भन्ने ?
अन्त्यमा, मिस वल्र्ड-२०११ को केही तयारी गर्नुभएको छ ?
मिस नेपाल भएको एक-दुई दिन त असाध्यै व्यस्त भइने रहेछ। आगामी सातादेखि मिस नेपालको आयोजक हिडेन टे्रजरले मिस वल्र्ड- २०११ को तयारीका लागि विशेष तयारी कक्षामा सहभागी गराउने कुरा सुनेकी छु। व्यक्तिगत रूपमा पनि म लन्डनमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्न उत्साहित छु।